Ra'iisal wasaare si dirqi ah uga baxsaday Koox Hubeysan oo dooneysay inay khaarijiso - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Ra'iisal wasaare si dirqi ah uga baxsaday Koox Hubeysan oo dooneysay inay khaarijiso - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Ra’iisal wasaare si dirqi ah uga baxsaday Koox Hubeysan oo dooneysay inay khaarijiso
Ra’isulwasaaraha dalka Haiti Ariel Henry ayaa sheegay inuu ka badbaaday shirqool lagu khaariji rabay, xilli uu ka qeybgalayay munaasabadda xuska xorriyadda dalkaas oo dhacday Sabtidi aanu kasoo gudubnay.
War-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska ra’isul wasaaraha Haiti ayaa lagu sheegay, in isku dayga dil ay ka danbeeyeen “burcad iyo argagixiso” kuaas oo isku dayay in ay toogtaan ra’isul wasaaraha xiili uu ku sugnaa kaniisadda magaalada Gonaives ee Waqooyiga Haiti, halkaas oo ay ka dhaceysay munaasabadda sannadguuradi 218-aad ee madax-bannaaniada Haiti.
Dalka Haiti ayaa sanadkii hore lagu dilay madaxweynihii ıalkaasi, markii koox hubeysan ay weerar ku qaadeen Gurigiisa.
Next articleXOG: Qodobka ugu adag ee Horyaalla Shirka Golaha Watashiga Qaran ee Muqdisho